धुरुधुरु किन रोए मदन कृष्ण ? पढ्नुहोस् | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > अर्थ > धुरुधुरु किन रोए मदन कृष्ण ? पढ्नुहोस्
धुरुधुरु किन रोए मदन कृष्ण ? पढ्नुहोस्
चैत २७, अरुलाई पेट मिचीमिची हँसाउने मान्छे डाँको छोडेर धुरुधुरु रोए । हँसाउने मान्छेले रुनै हुँदैन थियो भनेझैं गरी मदनकृष्ण रोए भनेर हल्ला भयो । यूट्युब र सामाजिक सञ्जालमा मदनकृष्ण रोएको दृश्य भाइरल नै बन्यो । सधैं हँसाइराख्ने, हाँसिरहने मान्छे रोएको देखेर अरुको पनि आँखा रसायो । सबैका आँखा रसाउनेगरी रोएका मदनकृष्णले आँसु पुछ्दै फेसबुकमा चार हरफको कविता कोरे :
हाँस्नुजस्तै दिल खोलेर रुन पाउनु पनि व्यक्तिको निजी अधिकार हो । पीडा, वेदना र अभावलाई आँसुले केही हदसम्म मल्हमको काम गर्छ । मदनकृष्णले पनि आँसुमा यस्तै मल्हम र शक्ति खोजेका हुन् । शरीरलाई कमजोर होइन, शक्ति दिने आँसु मदनकृष्णले अझै खसाल्न पाउनुपर्छ । प्रिय मान्छेको सम्झनाले कमजोर भएको मनलाई तागत दिने आँसुमा अवरोध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
जेलवाट छुटन नपाउदै सलमानले आक्रोस सहित लेखे फेसबुकमा यस्तो स्टाटस
नेपाल प्रहरीको आइजिपीमा कसले मार्लान् बाजी ?
‘म एउटा ठुलो फ्लप कलाकार हुँ,- करण जोहर
शक्ति देखाउने भन्दै कर्णालीमा हाम फाले २ झाँक्री: एकको मृत्यु, एक बेपत्ता !